Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara ihe La Niña | Netwọk Mgbasa Ozi
Portillo nke German | | Ciencia, Ihe gbasara ihu igwe
A na-anụ ihe ịtụnanya El Niño n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe niile n'ụwa nyere mmetụta ya na ihu igwe ụwa. Agbanyeghị, ihe ọ bụ na etu o si arụ ọrụ amaghị nke ọma. Kama nke ahụ, enwerekwa ihe omume di iche na El Niño nke a maara dika La Niña.
La Niña na-ewepụtakwa mgbanwe dị mkpa na ihu igwe mbara ala yana nsonaazụ ya dị ezigbo mkpa. Ya mere, anyị ga-ekwu maka ihe omimi a na omimi. Chọrọ ịma ihe niile gbasara ihe La Niña?
1 El Niño Aja
2 La Niña onu
3 Ihe si na La Niña pụta
4 Usoro nke ihe La Niña
5 Kedu usoro mgbanwe ihe La Niña nwere?
6 Anyị enwere ike ịkwụsị ndapụta ndị a?
Iji mara nke ọma La Niña nke ọma, anyị ga-ebu ụzọ ghọta nke ọma etu El Niño si arụ ọrụ. Nke mbụ, gịnị kpatara ha ji akpọ ya ihe ịtụnanya na ihe kpatara El Niño? Ihe omuma di na sayensị ọ bụghị ihe pụrụ iche, ma ngosipụta ọ bụla nke anụ ahụ nke enwere ike ịhụ mgbe ọhụụ ozugbo ma ọ bụ nha na-enweghị atụ. Ya mere, El Niño na mmiri ozuzo ha bụ meteorological phenomena.
Aha ndị na-akụ azụ̀ obodo Paita dị na mgbago ugwu Peru kpọrọ El Ni ino na-akpọrọ Jizọs nwa, ebe ọ bụ na ihe omume a pụtara n'oge Krismas.
Kedu ihe bụ El Niño? Omume ọma nke ikuku ahia na Pacific bụ na ha na-ada site n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ebe ọdịda anyanwụ. Ifufe ndị a na-ebugharị mmiri na mpaghara ndịda South America ma buru ha gaa Oceania na Eshia. Mmiri niile a kpokọtara na-eweta mmiri ozuzo na ọnọdụ ihu igwe okpomọkụ na mpaghara ndị a. Ihe na-eme na South America bụ na mmiri ọkụ niile kpaliri gbanwere mmiri oyi na-apụta site na ogbu mmiri na ihu ala. A na-akpọ iyi a nke mmiri oyi Humboldt ugbu a.
Ọnọdụ a nke mmiri ọkụ dị n'ebe ọdịda anyanwụ na mmiri oyi dị n'ebe ọwụwa anyanwụ na-emepụta ọdịiche ọnọdụ okpomọkụ na Oke Osimiri Pasifik niile, na-enye anyị ebe ihu igwe na-ekpo ọkụ na Oceania na akụkụ nke Asia. Ka ọ dị ugbu a, ikuku dị elu na mbara igwe na-agagharị na ntụgharị nke ọzọ, nke na-ebute usoro mgbasa ikuku nke na-akpali mmiri ọkụ ahụ mgbe niile n'akụkụ ọdịda anyanwụ. Nke a bụ ọnọdụ dị mma na Oke Osimiri Pasifik na ihu igwe.
Ma ihe ngosi El Niño, nke na-eme kwa oge na usoro nke atọ ruo afọ ise, na-agbanwe mgbanwe ndị a niile. Ihe omume a bidoro site na ime ka ikuku ikuku ahia daa, na-eme ka mmiri oku niile edobere na Oceania kwaga na South America. Mgbe mmiri a rutere n’ikpere mmiri, mmiri ndị a na-amịpụta ma na-emepụta mmiri ozuzo pụrụ iche, ebe ihu igwe dị n’akụkụ nke ọzọ nke Pacific na-atụgharị, na-akpata ajọ ọkọchị.
Maraworị ọrụ mmiri nke oke osimiri na ifufe ahia nke Oke Osimiri Pasifik. Ọfọn, ugbu a ọ ga-adịrị gị mfe ịghọta ihe ihe La Niña pụtara.
A họọrọ aha ahụ La Niña n'ihi na ọ bụ ihe megidere Nwa, ọ bụ ezie na ọ nweghị isi, ebe ọ bụ maka nwata Jesus. Mgbe ihe a mere, ahia ahia na ike kariri nke ozo, nke na - eme ka a na - echekwa mmiri ọkụ karịa n’akụkụ oke osimiri Oceania na Eshia. Mgbe nke a mere, oke mmiri ozuzo na-eme n'ebe ndị a, mana enwere oke ọkọchị na South America.
Ihe ịtụnanya abụọ a na-eme ka ụkọ azụ na ọdachi ndị na-emere onwe ha pụta.
Ihe omume La Niña na-ewekarị ọtụtụ ọnwa na ihe ọ ga-eweta bụ ihe ndị a:
Oke ikuku mmiri na-agbada na mpaghara Oceania, na mmụba na ya na ebe okpomọkụ na okpuru mmiri Pacific na ụsọ oké osimiri South America na Central America; nke na-akpata mmụba na nrụgide nrụgide nke dị n'etiti nsọtụ abụọ nke Equatorial Pacific.
Alder ifufe na-akawanye njọ, na-eme ka mmiri dịkarịsịrị jụụ dị n’akụkụ osimiri Pacific ka ọ dịrị n’elu.
Oke ikuku ahia siri ike na-emetụta oke osimiri, na-eme ka ọdịiche dị n'etiti oke osimiri dị n'etiti nsọtụ abụọ nke Pacific. Na nke ahụ oke mmiri dị elu n'ụsọ osimiri Colombia, Ecuador, Peru na ebe ugwu Chile na mmụba na Oceania.
N'ihi ọdịdị nke mmiri dịtụ oyi na Equator, oke osimiri dị elu na-ebelata n'okpuru uru ihu igwe. Nke a bụ ihe akaebe pụtara ìhè nke ọnụnọ nke La Niña. Agbanyeghị, anomalies kachasị nke kachasị njọ bụ ihe pere mpe karịa nke edere n'oge El Niño.
N'oge ihe omume La Niña, mmiri ọkụ dị na Pacific dịpụrụ adịpụ na-etinye uche na mpaghara na-esote Oceania ma ọ gafere mpaghara a ebe ọ malitere. oyi na-asọ oyi maka nwa agbọghọ ahụ.
Mmiri mmiri ozuzo na-abawanye na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, akụkụ ụfọdụ nke Africa, Brazil na Australia, ebe idei mmiri ga-adịkarị.
Nnukwu mmiri ozuzo na ọdịda anyanwụ America, na Ọwara Oké Osimiri Mexico, nakwa n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ Africa. Ọnọdụ okpomọkụ dị na ebe ndị a nwere ike ịdịtụ ala karịa ka ọ dị na mbụ.
Usoro nke ihe La Niña
Ihe omuma a adighi eme dika site na otu oge rue na oge ozo, kama igosiputa onwe ya kpam kpam, o gabigara uzo di iche iche.
Akụkụ nke mbụ mejupụtara ihe omuma El Niño malitere ida. Dị ka ọ na-adị, ihe abụọ a na-agbanwe agbanwe, yabụ mgbe ibe ha malitere. Mgbe ikuku ahia kwụsịrị ịkwụsị ọzọ na ikuku ugbu a na-eguzosi ike dị ka o kwesịrị, La Niña nwere ike ịmalite ịgbaso ma ọ bụrụ na ọsọ nke ifufe azụmaahịa ahụ malitere ịdị oke njọ.
A maara La Ni isa ịmalite ịmalite mgbe ikuku ikuku na-efe ike na mpaghara njikọta njikọ gbanwere ugwu site na ọnọdụ ọ nọ na mbụ. Na mgbakwunye, mpaghara ntụgharị na Pacific na-abawanye.
Ndị ọkà mmụta sayensị na-achọpụta na La Niña na-etolite mgbe ọ mere:
A na-eme ka ike gwụ ya ugbu a megide akaraYa, na - eme ka mmiri ọkụ nke na - esi n’osimiri Eshia, - emetụta obere mmiri dị na Pacific nke America.
Mgbasawanye nke oke osimiri, nke na-eme n'ihi ike ikuku ikuku. Ndagwurugwu ahụ na-ewere ọnọdụ mgbe nnukwu mmiri mmiri nọchiri mmiri oyi na omimi ma ihe nri niile dị n'okpuru usoro kachasị elu na-ebili. Site na ihe ndị na-edozi ahụ, ihe ndị dị ndụ na azụ na-aba ụba na ọ dị ezigbo mma maka ịkụ azụ.
Ike nke mpaghara ikuku nke ndịda, ọkachasị n'akụkụ equator, na-adọkpụrụ mmiri oyi na-ebelata okpomọkụ nke ọwụwa anyanwụ na etiti Pacific ebe okpomọkụ.
Ọnọdụ thermocline dị nso (mpaghara ebe enwere ngwa ngwa na ọnọdụ okpomọkụ) na oke osimiri dị na Pacific, nke na-akwado ịdịgide adịgide nke ụdị mmiri na-achọta nri ha ogologo oge.
Akụkụ nke ikpeazụ na-eme mgbe ikuku azụmaahịa malitere ịda mba na ike nke ọ na-eme.
Kedu usoro mgbanwe ihe La Niña nwere?
Mgbe La Niña na-eme, na-ewekarị n’agbata ọnwa itoolu na afọ atọ, dabere n’otú o siruru ike. Dị ka ọ na-adị, mkpumkpu oge ọ na-adị mkpirikpi ka ọ na-enwekwu mmetụta ọ na-ewe. Ihe ngosi kacha njọ dị na njọ ka egosiri n'oge ọnwa isii mbụ.
Ọ na-amalitekarị n’etiti afọ, rute oke ike ya na njedebe ma gbasaa n’etiti afọ na-eso ya. Ọ na-adịkarị karịa El Niño. Ọ na - apụtakarị n’agbata afọ 3 na 7.
Anyị enwere ike ịkwụsị ndapụta ndị a?
Azịza ya bụ mba. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ijikwa ọnụnọ ma ọ bụ ike nke ihe omume abụọ ahụ, anyị ga-enwe ike ijikwa okpomọkụ nke Oke Osimiri Pasifik. N'ihi oke mmiri dị n'oké osimiri a, anyị kwesịrị iji ike niile emepụtara na mgbawa nke 400.000 20 megaton hydrogen bọmbụ onye obula nwere ike ikpo oku mmiri. Ozugbo anyị nwere ike ime nke ahụ, anyị nwere ike ikpo ọkụ mmiri Pacific otu ọ masịrị anyị, agbanyeghị na anyị ga-eme ka ọ dị mma.
Yabụ, ruo mgbe achọpụtara ụzọ iji chịkwaa ihe ịtụnanya ndị a, naanị anyị nwere ike igbochi, ịmụrụ anya maka ịdị adị nke ihe ndị a iji mepụta atumatu maka ime ihe na mbenata mmetụta na, karịa, nyeere ndi ihe ojoo aka.
Amabeghị sayensị ka ọ mara ihe kpatara ihe ịtụnanya ndị a, mana amaara na ha na-eme ugboro ugboro n'ihi mgbanwe ihu igwe. Mmụba nke okpomoku zuru ụwa ọnụ na-agbagha ọdịdị nke ihe ịtụnanya ndị a na nrugharị nke mmiri.
Site na ozi a ejiri m n’aka na oge ọ bụla ị nụrụ aha abụọ ahụ, ị ​​ga-amata ihe ọ bụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » La Ni Laa onu
Eziokwu bụ, nke a ezughi oke, ọ nwere mmetụta, mana ọ bụghị ihe kpatara ya, ọ hapụrụ m afọ ojuju na nsonaazụ.
Mgbakọ na mwepụ na-ebu amụma gbasara mkpochapụ nke isii nke ụdị site na 2100